Ny Fiainantsika sy ny Fanompoana VJ: Fandaharana 22-28 Febroary 2016
“Lesona avy Amin’ny Bokin’i Nehemia”: (10 min.)
Ne 13:4-9: Aza miaraka amin’ny naman-dratsy (w13 15/8 4 § 5-8)
Ne 13:15-21: Ny fanompoana no ataovy ambony noho ny vola sy fananana (w13 15/8 5-6 § 13-15)
Ne 13:23-27: Asehoy foana fa tena Kristianina ianao (w13 15/8 6-7 § 16-18)
Ne 12:31: Inona no mety ho nahatsara an’ilay hoe nisy antoko mpihira roa, araka ny hevitrao? (it “Mozika”: “Karazana mozika resahin’ny Baiboly” § 5)
Ne 13:31b: Inona no nangatahin’i Nehemia tamin’i Jehovah? (w11 1/2 14 § 3-5)
Famakiana Baiboly: Ne 12:1-26 (4 min. na latsaka)
Fitoriana: (2 min. na latsaka) Mametraha fanasana Fahatsiarovana. Tsy dia liana ilay olona.
Fitoriana: (4 min. na latsaka) Mametraha fanasana Fahatsiarovana sy Tilikambo Fiambenana. Tena liana ilay olona. Mametraha fanontaniana hovaliana amin’ny manaraka.
Fampianarana Baiboly: (6 min. na latsaka) Hazavao amin’ilay mpianatra ny Fahatsiarovana. Ampiasao ny boky Ampianarina, pejy 206-208. Resaho aminy izay azonao anampiana azy, mba ho afaka hanatrika izy amin’io.
“Ny Olona Rehetra Mihitsy no Asao Hanatrika Fahatsiarovana!”: (15 min.) Fiaraha-midinika. Resaho izay hataon’ny fiangonana mba hamitana ny faritany. Alefaso ilay video momba ny Fahatsiarovana, rehefa mandinika an’ilay hoe “Inona avy no azonao atao?” Ampirisiho ny rehetra hanao izay vitany amin’io ezaka manokana io, ary hanampy an’izay rehetra liana. Asio fampisehoana iray.
Fianarana Baiboly: ia toko 9 § 14-24, famerenana (30 min.)
Ny Fiainantsika Kristianina sy ny Fanompoana: Fandaharana ho An’ny 22-28 Febroary 2016